I-Cow Byre Self-Catering Accommodation - I-Airbnb
I-Cow Byre Self-Catering Accommodation
Inqolobane ibungazwe ngu-Jacqueline
I-Bespoke Self-Catering Accommodation yaqedwa ngo-2020 e-Heart of the North Antrim Coast etholakala kumakhilomitha angama-5 ukusuka eLarne kanye namamayela angama-25 ukusuka enkabeni yedolobha laseBelfast.
Isendaweni eyi-1/2 mile ukusuka esangweni laseBallygally Beach ukuya eNorth Antrim Coast naseGlens sihlinzeka ngendawo yokuhlala enhle kakhulu, ethengekayo, eqhutshwa umndeni epulazini lethu.
Indawo yokuhlala inesitezi esisodwa kanye nesihlalo esinamasondo. Wonke amagumbi okulala anezindawo zokulala.
I-Cow Byre Accommodation ingamakhilomitha angama-5 ngaphandle kwetheku laseLarne esangweni eliya eCauseway Coastal Route neGlens. Sikhelwe phakathi kwamadolobhana ase-Ballygally nase-Cairncastle, ingemuva le-TV nefilimu futhi ikakhulukazi i-Game of Thrones.
Indawo yethu yokuhlala iyishede lezinkomo elisanda kuguqulwa elinophahla oluvalekile kanye nentelezi yasemakhaya.
I-Bull Pen Room ingakwazi ukuhlalisa izihambeli ezingafika kweziyisihlanu ezinendawo yokulala emithathu (umbhede okabili onesidwa esingenhla) kanye neqoqo lamabhedi. Umbhede uyatholakala futhi. I-ensuite inebhavu elineshawa ngaphezulu.
I-Wee Byre Room ingakwazi ukuhlalisa izihambeli ezifika kwezine futhi inamasethi amabili wamabhedi ane-walk in shower ensuite.
I-Dairy Room ingakwazi ukuhlalisa izihambeli ezifika kwezine futhi inombhede wabantu ababili kanye neqoqo lamabhedi. Leli gumbi lenzelwe ukuthi lihlangabezane nezidingo zezihambeli ezikhubazekile ezine-wetroom yokukhubazeka kanye nesistimu yezingcingo eziphuthumayo.
umbhede oyidabulu engu- 1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, Umbhede ongu-1, Umbhede wengane e-1
Isitolo sethu esiseduze yi-SPAR e-Ballygally enabasebenzi abawusizo kakhulu nabanobungane. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba kukhona i-Matties Meeting House Pub ehlomule ngomklomelo iyikhilomitha elingu-1/2 ikhuphuka ngomgwaqo obheke eCairncastle kanti i-Ballygally Castle Hotel ingamamayela angu-1/2 phansi komgwaqo obheke eBallygally. ICarnfunnock Country Park iqhele ngamamayela angu-2, idlula iCairndhu Golf Club endleleni eyamukela izivakashi ngomzuliswano wegalofu nasezindaweni zokudlela.